Horror Movie Ongororo: The Innocents - iHorror
musha	Horror Varaidzo Nhau	Horror Movie Ongororo: The Innocents
Horror Movie Ongororo: The Innocents
by Asher Luberto Dai 7, 2022
by Asher Luberto Dai 7, 2022 22,755 maonero
MuInnocents, Eskil Voget's sophomore chimiro, vana vanotonga zvakanyanya.
Ndivo vana, hones nehomoni dzavo, dzinofambisa zvinhu pano, kutanga neboka remagandanga akaonda, akasvinura maziso anowedzera masimba akaita seX-Men pamavhiri ekudzidzira.
Aya masimba anoramba ari pamipendero yeiyi horror flick, kunyangwe ichitaurwa nezvayo mumaziso emubereki ari kunetseka, kana kavha yebhodhoro neimwe nzira ichimhara padivi payo. Dzimba dzeBrutalist dzinotarisa pasi panzvimbo yekutamba yevafundisi panotamba zviitiko izvi; mufananidzo wemazuva ano wenzira iyo vana vanonzwa sevasingakundiki kutozosvikira vapinda munhau dzechokwadi.
Iyi firimu inotanga nemhuri ichipinda mufurati nevana vavo vaviri, mudiki wavo, Ida (Rakel Flottum), ndiye protagonist wedu. Anoda kuziva nezvenzira dzinogona kuitwa nevana chete, kunyangwe kuda kuziva kwake kunotungamirira kudambudziko paanopinza hanzvadzi yake, odira girazi mubhutsu yemumwe munhu, uye anodonhedza katsi kubva pamasitepisi emamita 100. Vanoda katsi chenjerai: izvi hazvipere zvakanaka kuKittens.
Nevazhinji vevagari veko pazororo rechirimo, Ida anoenda kune yake Evil Girl maitiro asati aita hushamwari neanogara akadzingwa Ben (Sam Ashraf), uyo anoita kunge ane mavanga pachipfuva chake uye masimba etelekinetic, kana ari kudhonza prank? Hazviratidzike sekutamba kana achitsemura bazi nepakati nekungoritarisa, uye hazviratidzike sekutamba apo mumwe musikana, Aisha (Mina Ashiem), anoratidza kuti anogona kutaura nehanzvadzi yaIda isingataure.
Kubatana kunoumbwa, asi kwete pakati pezvaungafunga. Iye zvino Ida anoda kupedza nguva nehanzvadzi yake, uyo anotanga kutaura mashoko akawanda, uyewo kuratidza manzwiro akawanda, kupfuura zvaaimboita. Pane kuwirirana kwakanaka pakati pavo uko chero munhu ane vanun'una vanogona kuenderana nako. Ida akanyara naAnna (Alva Ramstad), asi zvino aizotsika pamberi pemotokari yaifamba-kana Ben ane nzara yesimba- kuti achengetedzeke. Ben anotyisidzirwa nemasimba aAnna telekinetic, zvichitungamira kune nhevedzano yerufu uye pakupedzisira kuziva kuti zviito zvine mhedzisiro.
Mafeni emhando yebhaisikopo, kusanganisira basa raVoget naJoachim Trier, kana rudzi rwepakati pehusiku rinotyisa iro muparidzi wefirimu anozivikanwa, inogona kunge iri kutarisira chimwe chinhu chakanyanya kusimba kubva kuThe Innocents, inova mutambo wemhuri wakanyarara. Irejista rakasiyana nereavhareji bhaisikopo remagamba-X-Men izvi hazvisi-asi zvinogara zviri mumhepo, zvichizadza dhorobha nekusagadzikana asi kunotyisa.
Mafungiro ekufembera akarembera pamusoro pezviri kuitika, zvibodzwa zvichikuya pamwe nekutaura kweindasitiri, kurira pamusoro pesango rakasvibira nezvakavanzika zvaro zvakanyudzwa nezuva. Asi zvikuru, The Innocents mufananidzo, wakachengetwa nezvinhu zvengano dzakasviba; mareferensi akawanda mufirimu iri, angave kuna Peter Pan kana Lord of the Flies, nyaya mbiri dzevana vanowana simba asi votadza kuzvidzora.
Iyi firimu iri pamusoro pezvidzidzo, uye panguva yainosvika kumagumo uye mavhiri ekudzidzisa anobva, chimwe chinhu chakanyanya kusimba kupfuura simba resimba kana telekinesis inobuda-hapana chinogona pamusoro pesimba rerudo.